Uganda ayaa xustay sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay qaraxii 11kii Luulyo 2010… – Hagaag.com
Uganda ayaa xustay sanad guuradii 10aad ee ka soo wareegtay qaraxii 11kii Luulyo 2010…
Posted on 13 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
A Ugandan policeman secures the site of an Ethiopian-themed restaurant that was hit by an explosion in Kampala, July 12, 2010. Suspected Somali Islamists carried out two bomb attacks in the Ugandan capital that killed 70 people watching the World Cup final at a restaurant and a sports club, authorities said on Monday. REUTERS/Benedicte Desrus (UGANDA - Tags: SPORT SOCCER WORLD CUP CIVIL UNREST)
Uganda ayaa xustay sannad-guuradii 10aad ee ka soo wareegtay qaraxii 11-kii Luulyo, 2010 ee ka dhacay caasimadda Kampala ee ay ku dhinteen 76 taageerayaal kubadda cagta ah tobaneeyo kalena ay ku dhaawacmeen.
Ururka Al-shabaab ayaa ka dambeeyay weerarkaasi oo lagu bartilmaameesaday goobo lagu daawanayay koobkii adduunka sanadkii 2010.
Patrick Onyango, oo ah afayeenka booliska magaalada caasimada ah ee Kampala ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Xinhua in xuskaasi la qabtay xilli amniga aad loo adkeeyay.
“Had iyo jeer waxaan kor u qaadnaa amnigayaga inta lagu jiro bisha Luulyo sababta oo ah waxaan ognahay in argagaxisadu ay sida caadiga ah rabaan inay dadka xasuusiyaan wixii ay sameeyeen sanadihii hore, ”ayuu yiri Onyango.
Qorshayaal lagu doonayay in orod labo geesood ah lagu qabto goobtii uu ka dhacay weerarka ayaa la joojiyay iyada oo dalku uu ku jiro marxaladihii lagu joojinayey fiditaanka COVID-19.
Kooxda al-Shabaab, ayaa weerarkaas ku tilmamtay aargudasho ka dhan ah ciidamada Uganda ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
Ciidamada Uganda ayaa ah tirada ugu badan ee ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya, iyadoo lagu qiyaasay in ka badan 6,000 oo ciidan.
Onyango wuxuu sheegay in booliiska iyo hay’adaha ammaanka ay ku guuleysteen la dagaalanka argagixisada Bariga Afrika.